Nnwom 102 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Mmɔborɔwa a wayɛ hahaaha mpaebɔ
‘Mayɛ sɛ anomaa a ɔno nko ara si baabi mmɔbɔmmɔbɔ’ (7)
‘Me nna yɛ sunsuma a ɛretwam akɔ’ (11)
“Yehowa bɛsan akyekye Sion” (16)
Yehowa wɔ hɔ daa (26, 27)
Mmɔborɔni mpaebɔ; oyi ne komam dadwen adi kyerɛ Yehowa bere a wayɛ hahaaha* no.+ 102 O Yehowa, tie me mpaebɔ;+Ma me sufrɛ nnu w’anim.+ 2 Mekɔ ahohia mu a, mfa w’anim nhintaw me.+ Yɛ aso ma me;*Mefrɛ wo a, gye me so ntɛm.+ 3 Efisɛ me nna retwam kɔ te sɛ wusiw,Na me nnompe ahyehyew sɛnea ogya yɛ muka mu no.+ 4 Me koma ayɛ sɛ wura a atwintwam;+Me werɛ fi mpo sɛ medidi. 5 M’apinisi nti,+Mafɔn ara ma aka me nnompe.+ 6 Mayɛ sɛ nsu so dabodabo a watew ne ho kɔ akyirikyiri.Mete sɛ ɔpatu ketewa a ɔnenam amamfo so. 7 M’ani gu so saa ara;*Mayɛ sɛ anomaa a ɔno nko ara si ɔdan so mmɔbɔmmɔbɔ.+ 8 M’atamfo twa me adapaa daa nyinaa.+ Wɔn a wodi me ho fɛw* no de me din dome nkurɔfo. 9 Nsõ na abɛyɛ m’aduan,*+Na nisu afra m’anonne,+ 10 Efisɛ wo bo afuw me, na w’ani abere me so;Womaa me so, na wotow me kyenee. 11 Me nna ayɛ sɛ sunsuma a ɛretwam akɔ,+Na meretwintwam sɛ wura.+ 12 Nanso wo, Yehowa de, wowɔ hɔ daa,+Na wubegye din* wɔ awo ntoatoaso nyinaa mu.+ 13 Wobɛsɔre, na wubehu Sion mmɔbɔ,+Efisɛ bere aso sɛ wodom no;+Bere a woahyɛ no aso.+ 14 Wo nkoa nni kurow no abo ho agoru koraa,+Na emu mfuturu mpo som bo ma wɔn.+ 15 Amanaman no besuro Yehowa din,Na asaase so ahemfo nyinaa besuro w’anuonyam.+ 16 Yehowa bɛsan akyekye Sion;+Obeyi ne ho adi n’anuonyam mu.+ 17 Ɔbɛyɛ aso atie ohianiwa mpaebɔ,+Na ɔremmu ne mpaebɔ animtiaa.+ 18 Wɔakyerɛw eyi ato hɔ ama nkyirimma,+Sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa a wɔbɛba daakye* beyi Yah ayɛ. 19 Yehowa wɔ ne kronkronbea a ɛwɔ soro hɔ no, na ɔhwɛ fam;+Ofi sorosoro hɔ hwɛ asaase so; 20 Ɔpɛ sɛ otie nea ɔda afiase apinisi,+Na ogye wɔn a wɔabu wɔn kumfɔ no;+ 21 Ɛno bɛma nkurɔfo abɔ Yehowa din wɔ Sion,+Na wɔayi no ayɛ wɔ Yerusalem; 22 Ɛbɛyɛ bere a aman ne ahenniBoaboa wɔn ho ano som Yehowa no.+ 23 Ɔmaa m’ahoɔden sae prɛko pɛ;Otwaa me nna so. 24 Mekae sɛ: “O me Nyankopɔn,Wo a wowɔ hɔ awo ntoatoaso nyinaa mu,Nkyɛ me nkwa nna mu nyi me mfi hɔ.+ 25 Teteete na wotoo asaase fapem;Ɔsoro yɛ wo nsa ano adwuma.+ 26 Ne nyinaa betwam, nanso wo de, wowɔ hɔ daa;Ne nyinaa bɛyɛ dedaw te sɛ ataade. Wobɛsesa ne nyinaa te sɛ ataade, na ebetwam akɔ. 27 Wo de, wonsesa da, na wo mfe remma awiei da.+ 28 W’asomfo mma bɛtena ase dwoodwoo,Na wɔn asefo betim wɔ w’anim.”+
^ Anaa “bere a wabotow.”
^ Anaa “Bɔ wo mu ase na tie me.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Matwintwam.”
^ Anaa “Wɔn a wɔtweetwee me.”
^ Nt., “me paanoo.”
^ Nt., “wo nkae bɛtena hɔ.”
^ Nt., “ɔbɛbɔ wɔn aba wiase daakye.”